लोकतन्त्र र सम्बृद्ध नेपालका लागि कांग्रेसलाई भोटः नेका काठमाडौँ जिल्ला सभापति बानिया (भिडियो) | KTM Khabar
२०७४ कार्त्तिक २१ गते २२:४६ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । मुलुक चुनाबी प्रक्रियामा छ । आफुलाई बामपन्थि भन्न रुचाउने दलहरु एक भएर चुनाबमा होमिएको अबस्था छ भने अर्को तर्फ आफुलाई लोकतन्त्रको पहरेदार ठान्ने नेपाली कांग्रेस बाम गठबन्धनका विरुद्धमा चुनावमा होमिदैछ । यही पेरिफेरी तथा पेचिलो बन्दै गरेको राजनीतिक गतिविधिका विषयमा केटिएम खबर डट कमका लागि रवि भट्टराईले नेपाली कांग्रेस काठमाण्डौ जिल्ला सभापति कृष्ण बानिया (सबुज)संग विशेष भिडियो संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनै बानियासंग गरिएको कुराकानीको संपादित अंशः
यति बेलाको ब्यस्तता तपाईलाई थाहा नै छ । देश चुनाबी प्रक्रियामा होमिएको छ । म मेजर पार्टीको जिल्ला कार्य समितिको सभापतिको हैसियतले चुनाबी गतिविधि मै ब्यस्त छु । तपाईलाई अबगत गराउ चुनाब नेपाली कांग्रेसको पक्षमा पार्नको लागि दिन र रात नभनी पार्टीको काममा ब्यस्त छु । फेरी तपाईले भन्नुहोला कांग्रेसले नै जित्नु पर्ने कारण के भनेर ? तर राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई बचाउदै सम्बृद्ध नेपालको लागि आज कांग्रेसले चुनाब जित्न जरुरी छ ।
आफुलाई बामपन्थि दल भन्न रुचाउने पार्टीहरु एक भएर चुनाबमा होमिएका छन, तपाईहरु कस्ता योजना लिएर चुनाबमा होमिदै हुनुहुन्छ ?
तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा छ । बाम गठबन्धन भन्नेहरु एक भए पनि नभए पनि हाम्रो पार्टीले तपाई मान्नुस् या नमान्नुहोस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजबादका निम्ति खुन–पसिना बगाएको छ । यसमा बाम गठबन्धन होस या नहोस हामीलाई आपत्ति छैन । जुन रुपमा लोकतन्त्र माथि नै धावा बोल्ने किसिमबाट हुनै नसक्ने जस्तो देखिने गठबन्धन भएको छ । त्यो जनताले बुझेका छन् र यो गठबन्धनलाई चिर्नको लागि, लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस लागेको छ । हिजोका दिनमा पनि देशमा बिसम परिस्थिती निर्माण भएको बेलामा, समस्याहरु आएको बेलामा समस्याहरुको समाधान गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी र पार्टीका नेताहरुले निभाएको भुमिका तपाईलाई स्पष्ट छ । विभिन्न आन्दोलको नेतृत्व गर्दै शान्ति र संविधानका निम्ति कांग्रेसको भुमिका अग्रणी छ र कांग्रेसको उपस्थिति बिना कुनै पनि आन्दोलन सफल भएकै छैन । म यो कुरा ठोकुवा गर्छु । तपाईलाई स्मरण गराउँ पहिलो संविधान सभामा बामपन्थिहरुको बहुमत थियो किन संविधान आएन त ? त्यसैले यो भुल–भुलैयामा नपरेर अब जनताले बुझ्न जरुरी छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको निमित्त नेपाली काग्रेस बाहेक विकल्प नै छैन । तपाईलाई भनौ विश्वमा नै विलय हुदै गएको कम्युनिष्ठ शासनलाई भित्राउने गम्भिर खेलहरु भई रहेको छ र त्यो जनताले बुझि सकेका छन ।
तपाई काठमाण्डौ जिल्लाको काग्रेसको सभापति हुनुन्छ, दश निर्बाचन क्षेत्र रहेको तपाईको जिल्लामा तपाईको पार्टीको अबस्था कस्तो छ ?
काठमाण्डौमा कांग्रेसको अबस्था हिजो पनि राम्रो थियो आज पनि रम्रो छ । भर्खरै भएको स्थानिय चुनाबमा हामीले केही ब्यबस्थापन गर्न नसकेको कारणबाट थोरै पछी पर्यौ तर अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन । तपाईलाई अबगत गराऊँ हामी दश वटै क्षेत्रमा आज ंसंगठनिक रुपमा नै सशक्त छौ र अझ संगठनलाई चुस्त र दुरुस्त पार्नको निमित्त म दिन र रात नभनी खटेको छु र म सम्पुर्ण मेरा मातहत्तमा रहेका जिल्लाका साथीहरुलाई तपाईहरुको मिडिया मार्फतबाट भन्दै छु, म नेपाली कांग्रेस काठमाण्डौ जिल्ला कार्य समितिको सभापतिको हैसियतमा लोकतन्त्रलाई बचाउन तथा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चुनाब जिताउनको निम्ति अग्रपंत्तिमा उभिएर चुनाबी मोर्चा समाल्दै लोकतन्त्र र समुन्नत नेपाल निर्मांणका खात्तीर जुन सुकै मुल्य चुकाउन पनि तयार रहेको अवगत गराउछु र मेरो अपिल छ, कांग्रेसलाई माया गर्ने मनहरुलाई लोकतन्त्र, देश र जनताको हित साथै समुन्नत नेपाल निर्मांण गर्ने विर विपी, गणेशमान, किसुनजी, गिरिजा र शुशिल दाहरुको सपनालाई पुरा गर्न कांग्रेसलाई मतदान गर्नुहोस ।
त्यसो हो भने बामपन्थि दलहरुको एकताले तपाईको पार्टीलाई प्रभाव पार्दैन हो ?
ठिकै भन्नु भयो । मैले अगाडि नै भनि सके हामी सशक्त रुपमा प्रतिबाद गर्न तयार छौ । लोकतन्त्र माथि धावा बोलेको महशुस हामीलाई भएको छ र त्यो कुरा जनताले पनि बुझेका छन । त्यसैले राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका निम्ति हामी सधै अग्रस्थानमा उभिएर मोर्चा समाल्छौ र समुन्नत देश बनाउनमा हामी र हाम्रो संगठन लागि पर्ने छ । अहिले बिभिन्न सामाजिक संजालमा अफबाहा फैलाएर आफुलाई बामपन्थि भन्न रुचाउने साथीहरुले एक किसिमको झुटको खेती गर्दै हुनुन्छ । त्यो जनताले बुझेका छन् ।
भर्खरै भएको स्थानिय निकायको परिणाम हेर्ने हो भने तपाईले भनेजस्तो देखिदैन नी ?
स्थानिय निकायमा हामी भित्रैको ब्यवस्थापन कमजोरी भएको कारण हामी पछि पर्यौ, तर अहिले हामीले यसलाई सांगठनिक रुपमा नै मजबुद बनाएर गएका छौ । तपाईले आगामी चुनाबको परिणामबाट देख्न सक्नु हुनेछ ।
तपाई जिल्ला सभापति उम्मेदवारको टिकटको दौडानमा पक्कै हुनुहुन्थ्यो होला ?, के भन्नुहुन्छ ?
१० ओटा क्षेत्र रहेको जिल्लाको सभापति हुँ । मेरो जिम्मेवारी सबैभन्दा पहिलो कांग्रेका उम्मेदवारहरुलाई जिताउनु हो र संगठनलाई गति दिनु हो । तपाईले राम्रो प्रश्न सोध्नु भयो । स्वभाविक नै हो मैले पनि टिकटको लागि दाबी गरेको थिए । काठमाडौँ क्षेत्र नम्वर ६ बाट मैले दाबी गरेको थिए तर मैले पाईन । मलाई गुनासो पटक्कै छंैन । म र पुर्व–जिल्ला सभापति समेत हुनु भएको र अहिलेका बहालवाला रक्षा मन्त्री भिमसेन सर टिकटको प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो । भिमसेन सरले टिकट पाउनु भयो । म तपाईलाई अबगत गराउ, म पार्टीको महाधिवेशनबाट संगठको जिम्मेवारी दिए पछि ५ बर्षसम्म सांगठनिक काम गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको मान्छे तर त्यो हुदा–हुदै पनि जिल्ला सभापतिको हैसियतमा मैले दाबा गरेको थिए तर मेरो पार्टीले अहिले हतार नगर संगठनलाई नै मजबुद बनाउ भन्ने सन्देश दिएर भिमसेन सरलाई टिकट दिएको छ । उहाँ म भन्दा सिनियर पनि हुनुहुन्छ र मलाई टिकट नपाएकोमा गुनासो छैन । काठमाण्डौको सभापति भएको हैसियतले अब दश वटा नै क्षेत्रमा निर्बाचन आफ्नु पक्षमा पार्न शसक्त भुमिका खेख्नेछु ।
तपाईले नजिकका साथीहरुलाई चिड्याउनु भयो, अनि टिकट पाउन सक्नु भएन भन्ने हल्ला सुनिन्छ, के यो सत्य हो ?
यो कुरा हैन । मैले पार्टी संगठन गर्दा मेरा मातहतकालाई परिवारका रुपमा हेर्छु र माथिकालाई अग्रजको रुपमा हेर्छु र म स्पष्ट भन्ने गर्छु, सक्ने काम गर्न सक्छु र नसक्ने काम गर्न सक्दिन भनेर भन्छु । त्यसैले मेरा साथीहरु मैले चिड्याए भन्ने मलाई लाग्दैन र मैले भनि सके मैले टिकट नपाउनुमा यस्तो कुराको प्रभाव हैन जस्तो लाग्छ । काम गर्दै जादा कहि कमजोरी भयो भने त्यो तिक्ततालाई हटाएर अब नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन सम्पुर्ण पार्टी पङ्ती एक ढिक्का भएर लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा काठमाण्डौ जिल्लाको सभापतिको हैसियतमा जनतालाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
म नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति र मेरो जिम्मेवारी १० वटा क्षेत्रमा चुनाबमा सक्रिय भुमिका खेल्ने र चुनाब आफ्नो पक्षमा पार्ने हो । त्यसैले म आम–जनतालाई भन्न चाहान्छु, तपाईहरु कत्तै नअल्मलिनु होस लोकतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्दै देशको अग्रगामी विकासको निमित्त रुख चिन्हमा मतदान गरी नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनु होस । कांग्रेसको जित भनेको लोकतन्त्रको जित हो ।
तपाईहरुलाई पनि मेरो कुराहरु राख्ने अवसर दिनु भएकोमा धन्यवाद ।
नेपाली कांग्रेस काठमाण्डौ जिल्ला सभापति कृष्ण बानिया (सबुज) संगको भिडियो सम्वाद हेर्नका लागि तलको युटुब लिंकमा जानुहोसः